I-Curata: Umxholo ofanelekileyo weShishini lakho. | Martech Zone
ICurata sisiqulatho sesoftware yokukhawulezisa, ekunceda ngokulula fumana, hlela kwaye wabelane Umxholo ofanelekileyo kwishishini lakho.
Umxholo wokugcina ubugcisa kunye nesayensi yokufumana kunye nokwabelana ngomxholo osemgangathweni kwisihloko esithile. Ukukhawulezisa kunceda wakhe abaphulaphuli. Emva koko uneqela elikhulu labantu onokwabelana nabo ngesiqulatho sakho, kwaye ngubani onokusasaza igama. nge UNeicole Crepeau kwiNgqiqo kunye nokuTshintsha
fumana -I-Curata iyaqhubeka nokukhangela kwiwebhu ukuchonga umxholo ofanelekileyo kwishishini lakho. Iqonga likunceda ukuba ufumane umxholo we-intanethi omtsha kunye nentsingiselo, ucoce kwaye ulawule ukuhamba komxholo ngokulungisa kunye nokulungisa imithombo kunye nokwenza ngcono
ukufumanisa-ukuthanda ukufunda umxholo njengekherati yakho.
Hlela -Iikhathalogu zomxholo okrelekrele ukuze ukwazi ukuyifumana into oyifunayo. Umxholo ungadweliswa kwaye uhlelwe ukuze ifikeleleke ngokulula ngezindululo zokuphucula i-SEO yakho kunye nokuzibandakanya kwabaphulaphuli. Ixesha elingaphezulu, iqonga lakha ugcino lomxholo ukuze wandise ukusebenza kweinjini yokukhangela.
isabelo -Hambisa umxholo komnye, ezinye okanye zonke iindawo oya kuzo kwi-Intanethi. Ungachaza, wenze ngokwezifiso kwaye ubeke izimvo kumxholo wakho ohleliweyo, uwupapashe kubaphulaphuli bakho ukuba nini, phi kwaye ukhetha njani kwaye ulinganise iziphumo zakho ukuze uqhubeke ukufikelela kubaphulaphuli obafunayo.
tags: umxholo wekharityhulamUkuThengiswa kweMpahlacuratai-curationusetyenziso lwe curationiqonga curation
Uyilo oluphendulayo, ukuLungisa